Maamulka Puntland oo Amarro Duldhigay Ganacsada Boosaaso – Goobjoog News
Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cismaan Karaash oo kulan la qaatay ganacsada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa amarro duldhigay, taas oo la xiriirta qaadista shilinka Soomaaliga.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in ganacsatada laga doonaayo in ay qaataan shilinka Soomaaliga oo muddooyinkii dambe uu ka taagnaa muran u dhaxeeyo ganacsada iyo maamul goboleedka Puntland.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa xusay in haddii ganacsatadu ay kasoo baxaan ballankaas, dhankooda ay fulin doonaan ballanqaadyadii hore labada dhinac ay ugu heshiiyeen sida uu hadalka u dhigay Axmed Karaash.
” Waxaan ganacsatada faray inay qaataan lacagta shillinka soomaaliga , sidoo kalena ay dowladdu dhankeeda fulinayso qodobadii hore loogu heshiiyey” ayuu yiri Axmed Karaash.
Muddooyinkii dambe shacabka magaalooyinka maamulka Puntland ayaa waxaa ay walaac ka muujinayaan sicir barar baahsan oo ka dhashay shilinka Soomaaliga, waxaana u sabab ah shilinka Soomaaliga oo aad u badan marka loo eego lagacaha Dollar ka.